तपाइको चिउडो कस्तो छ ? मान्छेको चिउँडो हेरेरै थाहा हुन्छ त को-कति भाग्यमानी ? « News24 : Premium News Channel
तपाइको चिउडो कस्तो छ ? मान्छेको चिउँडो हेरेरै थाहा हुन्छ त को-कति भाग्यमानी ?
खासगरी मानिसलाई सुन्दर बनाउन अनुहारका अंगहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर समुन्द्र शास्त्रका अनुसार अनुहारका अंगहरुको सौन्दर्यजनक मात्र नभएर अरु पनि विभिन्न महत्व छन् ।
त्यस्तै महत्वपूर्ण अंग हो चिउँडो । मानिसका स्वभाव, गुण अवगुण थाहा पाउन उसको चिउँडो हेरे पुग्ने समुन्द्र शास्त्रको दावी छ ।
अण्डाकार चिउँडो पनि शुभ मानिन्छ । यस्तो चिउँडो हुनेहरु चकचके र कलाप्रेमी हुने बताइन्छ । यिनीहरु ब्यवहारिक र उच्च विचारका समेत हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिले कलाक्षेत्रमा चर्चा कमाउँछन् ।